တယ်လီနောသုံးစွဲသူများအနေဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ဖုန်းဘေကို အသုံးပြုပြီး Google Play Store မှ ဒီဂျစ်တယ် content များ (App များ၊ App အတွင်းမှ item များကို) အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
အက်ပလီကေးရှင်း ဆိုသည်မှာ ကွန်ပြူတာ ပရိုဂရမ်များဖြစ်ပြီး စမတ်ဖုန်း၊ tablet၊ ကွန်ပြူတာ နှင့်အစရှိသော မိုဘိုင်း device များတွင် ထဲ့သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် မိုဘိုင်း ဂိမ်းများ၊ လမ်းပြမြေပုံ GPS၊ လက်မှတ်၀ယ်ယူခြင်း၊ ဘဏ်နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အစရှိသဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုမျိုးစုံကို အက်ပလီကေးရှင်း တွင် ရနိုင်ပါသည်။
Google Play Store တွင် ဂိမ်းများ၊ ရုပ်ရှင်များ၊ သီချင်းများ စသဖြင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး နှင့် ဖျော်ဖြေရေး စသော နယ်ပယ်မျိုးစုံမှ အက်ပလီကေးရှင်းများစွာ ရှိပြီး သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အက်ပလီကေးရှင်းကို ရွေးချယ်ကာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အချို့သော အက်ပလီကေးရှင်းများသည် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး အချို့မှာ ၀န်ဆောင်မှုအတွက် ကျသင့်ငွေကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ အချို့အက်ပလီကေးရှင်းများမှာ Freemium စနစ် ဖြစ်ပါသည်။ Freemium ဆိုသည်မှာ အက်ပလီကေးရှင်း ကို အခမဲ့ရယူနိုင်ပြီး အက်ပလီကေးရှင်း အတွင်း၀န်ဆောင်မှုအတွက် ကျသင့်ငွေကောက်ခံမည် သို့မဟုတ် ရောင်းချမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ အားဖြင့် Clash of Clans ဂိမ်းအတွင်းမှ Gems များ ကိုဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၀န်ဆောင်မှုကို ရယူရန် ပထမဦးစွာ တယ်လီနောသုံးစွဲသူများအနေဖြင့် android ဖုန်းများတွင် Google အကောင့်ရှိရန် လိုအပ်ပြီး အရင်ဦးစွာ အကောင့်ထဲသို့ (Sign in) ၀င်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၀န်ဆောင်မှုရယူရန် အဆင့်ဆင့်ကို အောင်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
သင့် ဖုန်းမှ Google Play Store App ကို ဖွင့်ပါ။
သင် ၀ယ်ယူ/ရယူ လိုသည့် အက်ပလီကေးရှင်းကို ရှာပါ။
သင်သည် ကျသင့်ငွေ ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် သို့မဟုတ် ၀ယ်ယူရန် ကျသင့်ငွေ ခလုပ်ကို နှိပ်ပါ။
တယ်လီနောဖုန်းဘေဖြင့်ပေးချေမည့် နည်းကို ရွေးချယ်ပါ။
ထို့နောက် Buy ကို နှိပ်ပါ။
Google account ကို အရင်က မ၀င်ရောက်ထားပါက ယခု၀င်ရောက်ရန် password တောင်းခံမည်ဖြစ်ပီး သင့်အမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ လိပ်စာများကို ဖြည့်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ (ပထမဆုံး အကြိမ်အတွက်သာ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။)
သုံးစွဲမှု စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လက်ခံသဘောတူရန်တောင်းဆိုမည် ဖြစ်ပြီး သင်အတည်ပြုလိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် သင့်ဖုန်းဘေလက်ကျန်မှ ကျသင့်ငွေ ပမာဏကို ဖြတ်တောက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် သင်၀ယ်ယူလိုက်သော အက်ပလီကေးရှင်းမှာ ဖုန်းထဲသို့ဒေါင်းလုပ်ချနေမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့နောက် Google မှ ၀ယ်ယူမှုအတွက် အတည်ပြု အီးမေးလ်ကို ပေးပို့မည် ဖြစ်ပါသည်။
သင်သည် Google play store မှ ၀ယ်ယူမှုကို တယ်လီနောဖုန်းဘေဖြင့်ပေးချေမည့် နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ပါက သင့်ဖုန်းလက်ကျန်ငွေမှ ၀ယ်ယူမှုအတွက် ကျသင့်ငွေကို ချက်ချင်း ဖြတ်တောက်သွားမည် ဖြစ်ပြီး သင့်အနေဖြင့် ဖုန်းဘေလက်ကျန် ရှိသလောက် အက်ပလီကေးရှင်းများကို အကန့်အသက်မရှိ ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
အထက်ဖေါ်ပြပါ ၀ယ်ယူမှုများအတွက် တည်ဆဲဥပဒေများ နှင့် အညီ ကောက်ခံမည့် ကုန်သွယ်ခွန် ၅ ရာခိုင်နှုန်းကို သင့်အနေ ဖြင့် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး Google Play Store တွင် ပြထားသော ကျသင့်ငွေမှာ အခွန်မပါသည့်တန်ဖိုးများ ဖြစ်ကြောင်းကို သတိပြုစေလိုပါသည်။
သင့်၀ယ်ယူမှုစာရင်းကို Google Play Store ရှိ သင့်အကောင့် အောက်တွင်ရှိသော purchase history မီနူး၌ သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက တယ်လီနော ချက်ဘော့စ် သို့မဟုတ် မက်ဆင်ဂျာ သို့မဟုတ် hotline နံပတ် ၉၇၉ကို ဆက်သွယ်ကာ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Telenor ငွေတောင်းခံမှုစနစ်ကို ဖွင့်ရန်အတွက် အောက်ပါဗီဒီယိုတွင် ပြထားသည့်အတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
သင်သည် download ခလုပ်ကို နှိပ်လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် သင်သည် Google play store နှင့် တယ်လီနော တို့မှ ချမှတ်ထားသော သုံးစွဲမှု စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ကို လက်ခံသဘောတူ လိုက်နာပြီး ဖြစ်သည်ဟု ယူဆပါမည်။
တယ်လီနောမြန်မာအနေဖြင့် Google Play Store မှ သတ်မှတ်ထားသော အက်ပလီကေးရှင်း content များအပါအ၀င် သက်ဆိုင်ရာ နှုန်းထားများနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းကို သင့်အနေဖြင့် သတိပြုစေလိုပါသည်။ အက်ပလီကေးရှင်း content များကို အသုံးပြုရာတွငိ သင်နှင့် အက်ပလီကေးရှင်း ၀န်ဆောင်မှု ပေးသော provider အကြား တည်ရှိသော သဘောတူညီမှုအချက်အလက်များနှင့်အညီသာ ဖြစ်ပါသည်။
သင့်အနေဖြင့် အက်ပလီကေးရှင်းများကို ၀ယ်ယူမှုပြုလုပ်ပြီးသောအခါ ၂နာရီအတွင်းတွင် Google Play Store သို့မဟုတ် သင်၀ယ်ယူထားသော အက်ပလီကေးရှင်း ပိုင်ရှင် (Developer) ထံမှ ပြန်အမ်းငွေတောင်းခံနိုင်ပါသည်။ ၂နာရီ ကျော်ပါက Google ကို အီးမေးလ်ပို့၍ တောင်းခံနိုင်ပါသည်။
အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ကို ဒီလင့်တွင် ၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
၁။ Google Play Store မှ အက်ပလီကေးရှင်းများ download ချခြင်း ၀ယ်ယူခြင်းဖြင့် မိမိသည် Google မှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပြင် အောက်ပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုပါ https://play.google.com/about/play-terms/index.html တစ်ပေါင်းတည်း လိုက်နာပါမည်ဟု ကတိပြုပါသည်။.
။ မိမိဖော်ပြထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို Google သို့မဟုတ် အက်ပလီကေးရှင်း developer သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ မှ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ပြုလုပ်မှုများအပေါ် လက်ခံ သဘောတူပါသည်။
၃။ မိမိ download ချထားသော သို့မဟုတ် ၀ယ်ယူထားသော အက်ပလီကေးရှင်းအတွက် ကျသင့်ငွေ ဖြတ်တောက်ခြင်းကို မိမိအနေဖြင့် လက်ခံသဘောတူပါသည်။
၄။ မိမိ၀ယ်ယူ၊ ရယူထားသော အက်ပလီကေးရှင်း၏ ၀န်ဆောင်မှု အရည်အသွေးနှင့် ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းများမှာ ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ အော်ပရေတာအနေဖြင့် ငွေကြေးကောက်ခံမှု အခန်းကဏ္ဍ ကိုသာ လုပ်ဆောင်ကြောင်းကို သဘောပေါက်နားလည်ပါသည်။
၅။ မိမိ download ချထားသော သို့မဟုတ် ၀ယ်ယူထားသော အက်ပလီကေးရှင်း၊ ဂိမ်း သို့မဟုတ် ပရိုဂရမ် များကို ထဲ့သွင်း အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာသော နောက်ဆက်တွဲ ရလဒ် များမှာ မိမိတစ်ဦးတည်း၏တာ၀န်သာဖြစ်ကြောင်းကို လက်ခံသဘောတူပါသည်။
၆။ မိမိ download ချထားသော သို့မဟုတ် ၀ယ်ယူထားသော အက်ပလီကေးရှင်းနှင့် မိမိအသုံးပြုသော မိုဘိုင်း စက်များနှင့် ကိုက်ညီခြင်း ရှိမရှိကို မိမိအနေဖြင့် စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီးမှ မိမိသဘောဆန္ဒ အလျောက် ထဲ့သွင်းအသုံးပြုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံ သတိပြုပါသည်။
၇။ မိမိသည် အသက်၁၈နှင့်အထက် ဖြစ်ပြီး၊ အသက်မပြည့်မှီသေးပါက မိဘအုပ်ထိန်းသူ သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်သူ၏ခွင့်ပြုချက်ရမှသာ အက်ပလီကေးရှင်းကို download ချ သုံးစွဲမည် ဖြစ်ကြောင်း ကတိပြုပါသည်။
၈။ မိမိ download ချထားသော သို့မဟုတ် ၀ယ်ယူထားသော အက်ပလီကေးရှင်း ကို ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်လုပ် ဆောင်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ထိုအက်ပလီကေးရှင်းကို ဖန်တီးသူ သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင် မှ တောင်းဆိုသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအတွက် တယ်လီနောမြန်မာနှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်းကိုလည်း နားလည်ပါသည်။
၉။ မိမိအနေဖြင့် မှားယွင်းစွာ download ချထားမိသော သို့မဟုတ် ၀ယ်ယူလိုက်သော အက်ပလီကေးရှင်းအတွက် ပြန်အမ်းငွေတောင်းခံရတွင် တယ်လီနော အနေဖြင့် ငွေပြန်အမ်းရန် တာ၀န်မရှိကြောင်းကို နားလည်သဘောတူပါသည်။
၁၀။ မိမိ အနေဖြင့် download ချထားသော သို့မဟုတ် ၀ယ်ယူထားသော အက်ပလီကေးရှင်းအတွက် ကျသင့်ငွေကို တယ်လီနောမြန်မာက မိမိ ဖုန်းလက်ကျန်ငွေမှ နှုတ်ယူ ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုလည်း လက်ခံသဘောတူပါသည်။
၁၁။ Google Play Store မှ အက်ပလီကေးရှင်း တခုခုကို download ဆွဲခြင်းအားဖြင့် မိမိ download ချထားသော သို့မဟုတ် ၀ယ်ယူထားသော အက်ပလီကေးရှင်းအတွက် ပိုက်ဆံဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပြန်အမ်းငွေပေးခြင်း၊ စစ်စတန် မြှင့်တင်ခြင်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်း၊ သိုမှီး သိမ်းဆည်းခြင်း၊ စီစစ်တွက်ချက် ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုချင်း၊ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း စသော လုပ်ဆောင်ချက်များအပါအ၀င် အကျိုးဆက်များအားလုံးကို တယ်လီနောက ဖြစ်စေ အက်ပလီကေးရှင်းဖန်တီးသူကဖြစ်စေ Google Play Store ကဖြစ်စေ ပြုလုပ်မှုများကို မိမိအနေဖြင့် ချွင်းချက် လက်ခံ သဘောတူပါသည်။
၁၂။ မိမိဖော်ပြထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို Google သို့မဟုတ် အက်ပလီကေးရှင်း developer သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ မှ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်းများမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်နိုင်ရန် ဖြစ်ကြောင်း လက်ခံ သဘောတူပြီး ထိုအချက်အလက်များကို မိမိ ဆန္ဒ အလျောက်ထဲ့သွင်း ပါသည်။
၁၃။ မိမိ download ချထားသော သို့မဟုတ် ၀ယ်ယူထားသော အက်ပလီကေးရှင်းကို မိမိအနေဖြင့် အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဆက်စပ် ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်သည့် မည်သည့်တတိယအဖွဲ့အစည်း၊ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ တောင်းဆိုမှု အတွက်မဆို ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ (တယ်လီနော) ကတာ၀န်ယူဖြေရှင်းရန် မလိုအပ်ဘဲ မိမိမက အလုံးစုံ ပြေလည်သည်အထိ မိမိစားရိတ်နှင့် မိမိဘာသာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံကတိပြုပါသည်။
Google Play Store ဆိုတာဘာလဲ။
Google Play Store တစ်နည်းအားဖြင့် Google application store သည် Google ၏ Android စနစ်သုံး စမတ်ဖုန်းများတွင် မူလကပင် built in အဖြစ် ထဲ့သွင်းပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ Google Play store မှာ app (အက်ပလီကေးရှင်း)များကို ဒေါင်းလုပ် ရယူနိုင်သည့် နေရာဖြစ်ပါတယ်။
Google Play Store မှာ ဘယ်လိုမျိုး အက်ပလီကေးရှင်း တွေ ပါ၀င်ပါသလဲ။
Google Play Store တွင် ဂိမ်းများ၊ ရုပ်ရှင်များ၊ သီချင်းများ စသဖြင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး နှင့် ဖျော်ဖြေရေး စသော နယ်ပယ်မျိုးစုံမှ အက်ပလီကေးရှင်းများစွာ ရှိပြီး သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အက်ပလီကေးရှင်းကို ရွေးချယ်ကာ ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Google Play Store မှ အက်ပလီကေးရှင်း ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက် ကျသင့်ငွေ ကောက်ခံမှု ရှိသလား။
အချို့သော အက်ပလီကေးရှင်းများမှာ အခမဲ့ဖြစ်ပြီး အချို့မှာအက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်မူ အက်ပလီကေးရှင်း developer ကသတ်မှတ်ထားသည့် ကျသင့်ငွေကိုကောက်ခံမည် ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ အက်ပလီကေးရှင်းများမှာ Freemium ဖြစ်ပြီး Freemium ဆိုသည်မှာ အက်ပလီကေးရှင်း ကို အခမဲ့ရယူနိုင်ပြီး အက်ပလီကေးရှင်း အတွင်း၀န်ဆောင်မှုအတွက် ကျသင့်ငွေကောက်ခံမှာ ဖြစ်ပြီး ဒါမှမဟုတ် digital content များကို ရောင်းချမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် Mobile legend နှင့် PUBG ဂိမ်းများအတွင်းမှ စိန်များ ဂိမ်း အတွင်းပါ၀င်သော ဇာတ်ကောင်အသီးသီး၏ skin များ ကိုဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Google Play Store carrier billing ဆိုတာဘာလဲ။
Google Play Store မှ ဒစ်ဂျစ်တယ် content များကို သင့် တယ်လီနောဖုန်းဘေဖြင့် ၀ယ်ယူခြင်းကို Google play store carrier billing လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Google Play Store မှ အက်ပလီကေးရှင်းများကို direct carrier billing ဖြင့်၀ယ်ယူခြင်းက လုံခြုံမှုရှိပါသလား။
Google Play Store မှ အက်ပလီကေးရှင်းများကို direct carrier billing ဖြင့်၀ယ်ယူခြင်းက လုံခြုံမှုရှိပါတယ်။
Google Play Store မှ အက်ပလီကေးရှင်း ဒေါင်းလုပ်ချရန် ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ။
ပထမဦးစွာ တယ်လီနောသုံးစွဲသူများအနေဖြင့် android ဖုန်းများတွင် Gmail အကောင့်ရှိရန် လိုအပ်ပြီး ရှေးဦးစွာ အကောင့်ထဲသို့ (Sign in) ၀င်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် လုံလောက်သော တယ်လီနော ဖုန်းဘေရှိရန်လိုအပ်ပြီး အင်တာနက် connection (Wifi သို့မဟုတ် မိုဘိုင်း ဒေတာကွန်ရက်) ရှိရန်လိုပြီး သင့်ဖုန်းတွင် လုံလောက်သော memory နေရာအလွတ် ရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်။
Gmail အကောင့်မရှိရင် ဘာလုပ်ရမလဲ။
Gmail account ကို ဘယ်အချိန်မဆို လွယ်ကူစွာ အောက်ပါလင့်ခ်တွင် ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ here.
တယ်လီနော Postpaid သုံးစွဲသူအနေဖြင့် Google Play Store မှ ဒစ်ဂျစ်တယ် content (ဥပမာ အက်ပလီကေးရှင်း ၀ယ်ယူမှုအတွက်) တယ်လီနောဖုန်းဘေဖြင့် ငွေပေးချေလို့ရပါသလား။
ယခုလက်ရှိတွင် တယ်လီနော Prepaid (ကြိုတင်ငွေဖြည့်) သုံးစွဲသူများသာလျှင် တယ်လီနောဖုန်းဘေဖြင့် ငွေပေးချေလို့ရနိုင်ပါတယ်။
ဝယ်ယူမှုအတွက် အများဆုံး ခွင့်ပြုသတ်မှတ်ထားမှုမျိုး ရှိပါသလား။
ဖုန်းနံပါတ် တစ်ခုအတွက် Transaction တစ်ခုလျှင် တစ်သိန်းကျပ်၊ တစ်ရက်လျှင် ၂သိန်းကျပ်နှင့် တစ်လလျှင် ၄သိန်းကျပ် ထိသာ ဝယ်ယူခွင့် ရှိပါသည်။
Enable Telenor Billing ကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ အဆင်မပြေ ဘာလို့ ဖြစ်တာလဲ။
တယ်လီနော မိုဘိုင်းကွန်ယက်ပေါ်မှတဆင့် ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ Wifi ဖြင့် အင်တာနက် အသုံးပြုမှုကို ပိတ်ထားပေးရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ Dual Sim အတွက် Enable ပြုလုပ်မည့် တယ်လီနော နံပါတ်ကို Sim 1 နေရာတွင် ထားပေးရန်လိုအပ်ပြီး Sim2ကိုလည်း ပိတ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
၀န်ဆောင်မှုကိုအောင်မြင်စွာ ရယူပြီးဖြစ်ကြောင်းကို ဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲ။
သင့်အနေဖြင့် Google Play Store မှ ၀န်ဆောင်မှုရယူပြီးတာနဲ့ တပြိုင်နက် လက်ခံဖြတ်ပိုင်းကို သင်ထံသို့ SMS ပေးပို့မယ့်အပြင် သင်ရဲ့ Gmail အကောင့်သို့ ချက်ချင်းပေးပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။
၀န်ဆောင်မှု ရယူခြင်းအတွက် ကျသင့်ငွေကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
သင်ရယူထားသော ၀န်ဆောင်မှုအတွက် ကျသင့်ငွေကို သင့်ထံသို့ပေးပို့သော SMSတွင် သို့မဟုတ် Google မှပေးပို့တဲ့ ယင်း၀န်ဆောင်မှုအတွက်လက်ခံငွေဖြတ်ပိုင်း အီးမေးလ်တွင် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Google Play Store မှ ပြထားသော ကျသင့်ငွေမှာ အခွန်ကောက်ခံပြီးသား ဖြစ်ပါသလား။
Google Play Store မှ ပြထားသော ကျသင့်ငွေအပေါ် တွင် တည်ဆဲဥပဒေများ နှင့် အညီ ကောက်ခံသည့် ကုန်သွယ်ခွန် ၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ကောက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။
၀ယ်ယူထားပြီးသား အက်ပလီကေးရှင်းကို မတော်တဆ ဖျက်လိုက်မိပါက နောက်တကြိမ်ပြန် ဒေါင်းလုပ်ချလျှင် ကျသင့်ငွေထပ်ပေးရမှာလား။
ယခင် အက်ပလီကေးရှင်း ၀ယ်ယူရာတွင် အသုံးပြုထားသော Gmail အကောင့်ကို အသုံးပြုပြီး အကန့်အသတ်မရှိ အခမဲ့ ပြန်လည်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Google Play Store မှ ၀ယ်ယူထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ် content သို့မဟုတ် အက်ပလီကေးရှင်းကို စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိပါက ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
Google Play Store မှ ၀ယ်ယူထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ် content သို့မဟုတ် အက်ပလီကေးရှင်းကို စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိပါက ၂နာရီအတွင်း ပြန်အမ်းငွေတောင်းခံနိုင်ပါတယ်။ ၂နာရီ ကျော်ပါက Google ကို အီးမေးလ်ပို့ပြီး တောင်းခံနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ကို https://support.google.com/googleplay#topic=3364260 တွင် ၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Google Play Store မှ ၀ယ်ယူထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ် content သို့မဟုတ် အက်ပလီကေးရှင်းကို စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိပါက တယ်လီနောမှ တာ၀န်ရှိပါသလား။
တယ်လီနောမြန်မာအနေဖြင့် Google Play Store တွင် ရောင်းချထားသော သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်သော အက်ပလီကေးရှင်း များရဲ့ အကြောင်းအရာ၊ culture၊ စကားလုံးအသုံးအနှုန်း၊ content များရဲ့ ဆိုလိုရင်း အပါအ၀င် သတ်မှတ်နှုန်းထားများနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းကို သင့်အနေဖြင့် သတိပြုစေလိုပါတယ်။ အက်ပလီကေးရှင်း content များကို အသုံးပြုရာတွင် သင်နှင့် အက်ပလီကေးရှင်း ၀န်ဆောင်မှု ပေးသော provider တို့ကြား တည်ရှိသော သဘောတူညီမှုအချက်အလက်များနှင့်အညီသာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကို ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပြီး သင့်ဖုန်းအတွင်းသို့ ထဲ့သွင်းခြင်းမပြုမီ သင့်ထံမှ တောင်းခံသော အကြောင်းအရာနှင့် အချက်အလက်များကို သေချာစွာ စီစစ်ခွင့်ပြုပြီးမှသာလျှင် ထဲ့သွင်းအသုံးပြုရန် အကြံပြုလိုပါတယ်။